လူ့ဘ၀နှင့်ပြဿနာများ ~ Arakan Student Monks Association
8:01 PM ပင်မ, ဆောင်းပါး No comments
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရာစုနှစ်တစ်ခုအလွန်က မည်သို့မျှ ကြံစည်မျှော်လင့်စိတ်ကူး မထားခဲ့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု့များကို လက်ဝယ် ပိုင်ပိုင် အောင်မြင်ရရှိခဲ့လေပြီ။ခေတ်သစ် နည်းပညာများက အချိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့် သဘာဝတရားကို အနိုင်ယူလျှက် ကျွန်ုပ်တို့ဆီကိုရောက်ရှိလို့နေပြီး ၊ .ထိုခေတ်သစ် နည်းပညာများ၏ အကူအညီများကြောင်း များစွာသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို အောင်မြင်နိုင်သော် လည်း နောက်ဆုံး မေးခွန်းက ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိတ်က ဘိုးဘွား ဘီဘင်တို့ ခေတ်က ကဲ့သို ပျော်ရွှင်ကြပါရဲ့လား?
အဖြေကတော ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ၊ အမျိုးသမီး များနှင့် ခလေးငယ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု့၊ ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု့၊ အသားအရောင် နှင့် ဇာတ် ခွဲခြားမှု့တို့က အရှိန်အဟုန်း မလျှော့ဘဲ ဆက်လက် ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ စင်စစ် ရုပ်ဝတ္တုပိုင်းဆိုင်ရာ သာယာမှု့နောက်သို့ လိုက်ကြ သောသူများသည် ဆင်းရဲသော သူများထက်ပင်ပို၍ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရ နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးတွင်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေကြရသော
ပြဿနာများမှာ စိတ်ဖိစီးမှု့၊ အထီးကျန်မှု့ကဲ့သို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတို့သည် အရေးပါသောအဓိကပြဿနာ တစ်ရပ် ဖြစ်နေပါသည် ။ ထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာများအတွက် မည်သူ့မှာတာဝန်ရှိပါသနည်း?
လူသားများ၏ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊သိပ္ပံပညာရှင်များ ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွါးရေးသမားများ အသံကောင်းဟစ် နေကြသည်မှာ “တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာဖို့အတွက် ဆွေးနွေးနေပါသည်အဖြေရှာနေပါသည်“ ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။သို့သော်လည်း`ဤဆိုးကျိုးများ၏ အပြစ်တင်ခြင်းကို မည်သူများက မျှဝေခံစားရမည်နည်း? ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှာ အားလုံးမှာညီတူညီမျှတာဝန်ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မိမိကိုယ်မိမိ ရိုးသားစွာဖွင့်ဟ၀န်းခံရမည်ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် တစ်ခြားသော လူသားများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှု့အတွက် တာဝန်ကိုယ်စီးရှိကြပါသည်။ ဥပမာ လူသားများ၏ ကာမဂုဏ်အားရုံးခံစားမှု့ ဆိုင်ရာ အတွက် တရားမမျှတသောလုပ်ရပ်များ၊ အာဏာနှင့် ငွေအတွက် မတရားသောနည်းဖြင့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းမြောက်များစွာသောကုန်ထုတ်မှု့များ ကို ဤကာမဂုဏ်ကိစ္စများအတွက် အသုံးပြုနေသော လောဘ ။ သည် ဖြစ်ထွန်းမှု့များသည် လူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်များအား သားကောင်းဘ၀သို့ ကျရောက်စေပါသည်။ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ ရှေးတုန်းက မရှိခဲ့ဖူးသော မကောင်းသော်ဆိုးကျိုးများ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော လုပ်ရပ်များ၊ လိမ်လည်မှု့များ လူသားများအကြားမှာပဋိပက္ခများသည် လူသားများ၏ ဆန္ဒကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀၊ အိမ်တွင်း၊ အလုပ်တွင်းသာမကဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာထိဖြစ်ပါသည် ။
ဆူပူသောင်းကျန်းမအေးချမ်းမှုမှ ဖြစ်လာသော ကြောင့်ကြ ပူပန်မှု နှင့် ကြောက်ရွံ့မှု တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကာယစိတ္တာနှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာမှုတို့အပေါ် ပြဿနာဖြစ်သည်သာမက ယိုယွင်းပျက်စီးစေမှုလည်း ဖြစ်ကြပါသည်။
တဏှာသည်သူတို့အနားမှာရှိသော အရာအားလုံးကို စိုးမိုပြီး လူသားများသည် ကမ္ဘာမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသတ္တ၀ါ တစ်ကောင်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဤနည်းဖြင့်လူသားများသည် စိတ်ချမ်းသာ မှု့ကိုစွန့်လွှတ်လျှက် အာဏာနှင့် ရုပ်ဝတ္တုဆိုင်ရာပြည့်စုံမှု့သို့သာအငမ်းမရလိုက်ပါနေကြတောသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေကြရသော ပြဿနာ၏အခြေခံမှာကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြားလာမှု့နှင့် ပညာကို မှားယွင်းသောစွာအသုံးချမှု့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်း ပညာများက အံ့မခန်း တီထွင်ကြံဆမှု့အသစ် မျာွးကို ထုတ်လုပ်နေသော်လည်း ကမ္ဘာကြီး သည် လုံခြုံမှု့နှင့် ငြိမ်းချမ်းမှု့ကင်းမဲ့နေဆဲရှိသေးသည်။ တကယ်တော သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ များကပင်လူဘ၀ကိုရှေ့ကနှင့်စာလျှင် ပို၍လုံခြုံမှု့မရှိအောင်ပြုလုပ်နေဘိသကဲ့သို့ ဖြစ်ချေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေကြရသော ပြဿနာတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်ဆိုင်ရာ သာ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမလာလျှင်လူလောကကြီးသည် အန္တရာယ်များကြားမှာ ပင်ပန်းရုံမှလွဲ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံမှုအတွက်ကတော အလှမ်းဝေးနေဆဲပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ။
မှတ်ချက် ။ ဆရာတော်ကေသိရီဓမ္မာနန္ဒ၏ Human life and problems ဆောင်ပါးအားစာရေးသူအမြင်ဖြင့်ဆီလျှော်သလိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည် ။
အရှင်ခေမာဝံသ မဟီဒေါတက္ကသိုလ် (ထိုင်းနိုင်ငံ)